Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal awood u leh inuu duqeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka – Balcad.com Teyteyleey
Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal awood u leh inuu duqeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal Balaastik ah oo awood u leh inuu duqeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka sida New York, Los Angeles and Chicago, waxayna saraakiil ku taqasustay arrimaha hubka ay sheegayaan in tijaabada gantaalkaasi oo ah nooca xambaara hubka Nukliyeerka uu khatar ku yahay caalamka.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-Un ayaa ku amray ciidamada dalkiisa inay difaacyada hore la geeyo shixnado hub ah oo uu ay ku jiraan gantaalaha isaga gudba qaaradaha oo uu ugu dambeeyay midkii ay tijaabisay maalintii Jimcaha aynu soo dhaafnay.
Tijaabada gantaalka ee Kuuriyada Waqooyi waxaa walaac ka muujiyay dowladaha xulafada la ah Mareykanka sida Shiinaha iyo Japan oo xuduud la leh, waxayna sheegeen in tallaabadani ay tahay mid uga sii dareysa xaaladda gobolka iyo dadaallada lagu doonayo nabad ka dhacda saddexda wadan ee deriska ah.
Dowladda Mareykanka ayaa iyadu sheegtay in khatarta Kuuriyada Waqooyi ay ka bixinayaan jawaab cad, waxayna saraakiisha Mareykanka sheegayaan inay qaadayaan dagaal ay uga hortageyso dhaqdhaqaaqyada ciidamada Kuuriyada Waqooyi.
Waa markii labaad oo Kuriyada Waqooyi tijaabineyso gantaalaha Balaastikada ee xambaara hubka Nukliyeerka isla markaana digniin culus u dirtay dowladda Mareykanka oo ay ugu hanjabtay inay u adeegsaneyso hubkeeda casriga ah.
The post Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaal awood u leh inuu duqeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka appeared first on Ilwareed Online.
Ninkii dadka ku laayey Jarmalka oo la aqoonsaday